भागरथी भट्ट बलात्कारपछि हत्या प्रकरण : आठ दिनसम्म शव उठेन, गाउँ हुँदै अब सिंगो जिल्ला आन्दोलनमा — Raranews.com
बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको आठ दिन बित्दा पनि प्रहरीले हत्याराको सुइँको पाउन सकेको छैन । हत्यामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै गाउँबाट सुरु भएको आन्दोलनमा अब सिंगो जिल्ला नै उत्रिएको छ ।
भागरथीको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै बैतडीमा आन्दोलन चर्किएको छ । बिहीबार सदरमुकाम गोठालापानीमा विद्यार्थीले बृहत् प्रदर्शन गरेका छन् ।
विभिन्न विद्यालय र जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले शाहिलेक र गोठालापानी बजार हुँदै गढीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि पुगेर दुई घन्टासम्म नाराबाजी गरेका छन् । भागरथीको जस्तो नियति अन्त्य गर्न बलात्कारीहरूलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘हामीले छोरीहरू निकै असुरक्षित भएको महसुस गरेका छौँ,’ भागरथी हत्याविरुद्धको आन्दोलनकी अगुवा निशा भट्टले भनिन्, ‘हत्यारा पक्राउ नपर्दासम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’
हत्या भएको तेस्रो दिन जिल्ला अस्पताल बैतडी पु¥याइएको भागरथीको शव भोलिपल्ट मात्रै पोस्टमार्टम गरियो । दोषी पत्ता नलाग्दासम्म शव नउठाउने आफन्तको अडानपछि अस्पतालको शवगृहमा उनको शव राखिएको छ ।
शव सुरक्षित राख्न मिल्ने ‘मर्सरी बक्स’ नभएका कारण अस्पतालले विभिन्न उपाय अपनाएर शव जोगाउने प्रयास गरेको छ । तर, त्यसरी धेरै समय राख्न नसकिने अस्पतालको भनाइ छ । भागरथीको शव काठको बाकसमा राखिएको छ । ‘डिपफ्रिजमा आइस बनाएर बाकसभित्र राख्दै शव चिस्याइरहेका छौँ,’ जिल्ला अस्पतालका डा. वसन्त जोशीले भने, ‘दिनहुँ आइस फेर्दै गरे पनि यो सुरक्षित हुँदैन ।’
अस्पतालका अनुसार आठौँ दिनसम्म आइपुग्दा भागरथीको अनुहार चिन्न सकिने अवस्थामा छ । तर, गन्हाउने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । जिल्ला अस्पतालले ‘मर्सरी बक्स’ मगाउने प्रयास गरे पनि तत्काल सम्भावना न्यून देखिन्छ । ‘धनगढी र काठमाडौंसम्म खोजी गर्दा पनि मिलेन । बाहिरबाटै मगाउनुपर्ने देखिन्छ,’ डा. जोशीले भने, ‘प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराएका छौँ । प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्ने सूचना पाइएको छ ।’